Semalt Expert: Plugins amin'ny WordPress Free Glossary - Top Advice From Expert
Raha manana tranonkala be dia be ny site-nao WordPress ary dia voadona amin'ny famaritana sy ny fitenenana miverimberina, dia tokony mametraka plugin glossary faran'izay haingana. Ny plugin-n'ireo glossary dia manampy amin'ny fandefasana dika mitovy ary mitazona ny famaritana sy ny fepetra voalamina volana vitsivitsy aorian'ny volana. Ireo Plugins WordPress ireo dia mamela anao hampifandraisina ny fepetra voalazan'ny lahatsoratrao amin'ny famaritana ao anaty lisitra iray ary mamonjy ny fotoanao. Ny plugins amin'ny glossary dia manome fahafahana anao haneho ireo teny manan-danja ao amin'ireo tranonkala mitovy ary haka ireo mpitsidika avy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa, hampihena ny taham-pidinao.
Eto i Alexander Peresunko, manam-pahaizana manokana avy amin'ny Semalt, dia niresaka momba ny plugins amin'ny teny glossary sy tsara indrindra amin'ny WordPress.
1. Rakoutou Box
Io dia iray amin'ireo plugins glosary malaza indrindra ho an'ny mpampiasa WordPress - 6AR1001-0BC30-0AA0 SIEMENS. Raha mikasa hanome vokatra tsara sy toro-hevitra ho an'ny mpitsidika ianao dia tokony hapetraka ity plugin ity ary alao haingana izy io raha vao azo atao. Azonao atao ny mampiasa ity plugin ity amin'ny alàlan'ny lahatahiry Plugins ao amin'ny WordPress ary afaka manova ny fanovana eo amin'ny blôginao.
Raha te-hanova ny mpamaky amin'ny teny sy ny tranonkala hafa ianao, dia ny plugin dia manana plugin glossary ho anao. Manana endri-javatra miavaka izy io ary afaka miditra amin'ny tranonkala WordPress na bilaogy rehetra. Hanampy anao hitazona ireo mpitsidika mipetraka ao amin'ny tranokalanao ianao rehefa miorina tsara ny lahatsoranao ary mijery tsara..
3. Double Click Dictionary Look-up
Ity plugins glossar mahafinaritra ity dia mora ny mametraka sy maimaim-poana. Raha toa ka miasa araka ny tokony ho izy ny anarana, dia manome soso-kevitra. Raha vantany vao nametraka sy nampiditra ity plugin glossary ity tao amin'ny tranokalanao WordPress ianao dia afaka manamarina ny kalitao amin'ny votoatiny na lahatsoratra ianao ary afaka manatsara ny voambolana ao anaty aterineto. Tsy maintsy ampidirinao ao amin'ny tranonkala tsirairay ny lisitry ny glossarinao ary manomboka manintona olona maro hatrany amin'ny tranokalanao, mampitombo ny varotrao ary mahazo vola be.
Ity plugin ity dia mamorona ny interface mampifanaraka azy amin'ny navigateur amin'ny alfabeta sy ny lohatenin'ny lahatsoratra. Ity plugins glossary mahafinaritra ity dia maimaim-poana ary azo ampiasaina amin'ny tranokala WordPress sy bilaogera. Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana tsy ampy amin'ny teny esperanto Ny safidy maimaim-poana dia voafetra ny safidy marobe, fa ny famandrihana maimaim-poana dia hamaha ny fifandraisana sy tolotra maro ho anao.
5. WP Glossary
Io dia iray amin'ireo plugins glosary malaza indrindra amin'ny WordPress mpampiasa. Izany dia natao ho an'ireo tia rakibolana sy glossary ary mora ny mametraka azy. Ny plugin dia manampy anao hihazona ny fifantohan-tsaina sy ny fifantohan-tsain'ireo mpamaky anao miaraka amin'ny serivisy maimaimpoana sy ny drafitra miavaka.
Ity ny glossar iray hafa sy ny plugin plugin hafa mahasoa sy mahasoa anao. Ny mpandàla sarimihetsika dia mamela ireo mpampiasa handrindra ny votoatiny ao anaty tranonkala ary manampy adiresy an-tserasera amin'ny tranonkala rehetra mandritra ny minitra vitsy. Tsy mila manao na inona na inona amin'ny code HTML ianao satria ity plugin ity dia manao asa be dia be ho anao indray mandeha. Na dia tsy novana nandritra ny fotoana fohy aza izy io, dia mbola milay ihany ny plugin Source .